Wararka Maanta: Sabti, May 12, 2012-Ciidammo Tiradoodu gaarayso 1,500 oo Askari oo Tababar loogu soo xiray Degmada Doolow ee Gobolka Gedo
Ciidamadan Tababarka loo soo xiray ayaa waxa ay ku qalabeysnaayeen hubka noocyadiisa kala duwan iyo weliba gaadiidka dagaalka, iyadoona cutubyo kamid ah ay soo gaareen degmada Baladxaawo ee Gobolka Gedo.
Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamadani ay qeyb ka noqon doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-shabaab ee ka soconaya gobolka Gedo, waxayna sheegeen in saacadaha soo socda ay ciidamadani gaari doonaan furimaha hore ee Dagaalka.
Dhinaca kale; deegaano hoostaga degmada Garabahaareey ayaa maanta laga dareemayaa xiisado dagaal oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa Ahlusunna iyo xoogagga Al-shabaab.
Goob-jooge ku sugan magaalada Garbahaareey ayaa HOL u sheegay in maanta saacado kooban la xiray ganacsigii iyo weliba isusocodkii magaalada Garbahaareey arintaasoo ka danbeeyay kadib markii magaalada laga dareemay guluf colaadeed oo kusoo wajahan.
Saraakiisha dowladda KMG iyo kuwa Ahlusunna ee gobolka Gedo ayaa ku hanjabay in dhawaan ay si buuxda gacanta ugu dhigi doonaan guud ahaan gobolka Gedo oo ay haatan qeybo kamid ah joogaan xoogagga Al-shabaab.